Wona Ruzivo rweVatengi nePolisi Dhata yeHodges University
Hodges Yunivhesiti Yevatengi Ruzivo
Mitemo inotenderedzwa neDhipatimendi reDzidzo reUS kuita shanduko dzakaitwa kumutemo wePamusoro Dzidzo wa1965, sekugadziriswa (HEA), neHurumende Dzidzo Yakagadziriswa ya1998 inoda kuburitswa kwerubatsiro rwemari neruzivo rwemasangano kuvadzidzi vari pasi pezvirongwa zvekubatsira vadzidzi zvemari inotungamirwa zvichiteerana neChinyorwa IV cheiyo Yepamusoro Dzidzo Mutemo wa1965, sekugadziriswa. Aya mapurogiramu anosanganisira iyo Federal Pell Grant Chirongwa uye iyo William D. Ford Federal Direct Loan Chirongwa. Pasi pemirau, Hodges University inofanirwa, pagore, kugovera kune vese vadzidzi vakanyoresa chiziviso chekuwanikwa kwerubatsiro rwemari uye ruzivo rwemasangano runodiwa kuti riziviswe zvichiteerana nekugadziriswa kweHEA uye zvichiteerana neMhuri Dzidzo Kodzero uye Yakavanzika Mutemo (FERPA ) iyo inotonga mukana wekuwana marekodhi edzidzo evadzidzi akachengetedzwa nemasangano edzidzo uye kuburitswa kweruzivo kubva kune izvo zvinyorwa. Ruzivo rwevatengi rwevazvino uye vanotarisira vadzidzi vanogona kuwanikwa kuburikidza neiyi link iripazasi. Vadzidzi vanogona zvakare kubata Hofisi yeRegistrar kuburikidza neemail ku registrar@hodges.edu kukumbira kopi kopi yezvakaziviswa izvi kana kune rumwe ruzivo pane chero ipi yenyaya idzi. Pamusoro pezvo, vadzidzi vanogona kunanga mibvunzo yakanangana nezve rubatsiro rwemari yevadzidzi ku finaid@hodges.edu.
Pamusoro pezvo, takaita kuti Webhusaiti Yedu Yakavanzika Policy iwanikwe kumagumo kweichi peji remberi. Ndokumbira kuti utibate nesu chero mibvunzo kana zvinetsekedzo zvaungave uine maererano neruzivo urwu.
Yegore FERPA Notification
Copyright Kuputsa Mutemo
Kusiyana Kwevadzidzi Muviri
Bumbiro & Zuva reVagari
Zvabuda zvevadzidzi - Koreji Navigator
Chinyorwa chebhuku Ruzivo (Mari dzeResource)
Kubvumidzwa, Kubvumidzwa & Rezinesi
Chinjana cheCredit & Articulation Agreements
Campus Chengetedzo Policy (Clery Mutemo)
CARES Mari - Federal Kuzivisa
HEERFII Mari Q1 Kushuma
HEERFII Mari Q2 Kushuma
HEERFIII Mari Q2 Kushuma
Zvirongwa zveVadzidzi ZveMari Zvekubatsira
Kunyorera Federal Federal Rubatsiro
Kodzero dzevadzidzi & Mabasa
Inogutsa Yedzidzo Kufambira Mberi (SAP)
Dzosera & Kurega Mitemo
Institutional Code yeKufambisa
Zvirango zvekutyorwa kwemutemo wezvinodhaka
Mabhuku & Zvishandiso Policy yeChinyorwa IV Rubatsiro
Chechitatu-Bvumirano Chibvumirano cheChinyorwa IV Kudzoserwa
Mutemo Wekunetseka Kwevadzidzi
Hurumende & Agency Maitiro
Vadzidzi Vane Urema
Kuchengetedza & Proctoring Policy
Koreji Score Card
Kuchengetedza Ruzivo rwevadzidzi
General Sangano Ruzivo
Chikumbiro chePamutemo Chinyorwa
Kubudirira Kwevadzidzi & Performance
Basa & Jobho Kuisa Services
Musoro IX Kuteerera Ruzivo
I. Rondedzera chiitiko
Kana iwe uri munjodzi nekukasira, kana kana iwe uchidavira kuti pangave nekuenderera kwekutyisidzira kwauri kana kune vamwe paYunivhesiti, ndapota nyorera Kutevedzwa Kwemutemo nekudana 911.
Kutsvaga rubatsiro nekukasira kungave kwakakosha kuverengera kuchengetedzeka kwemuviri, kuwana kurapwa, kana kumwe kutsigirwa. Zvinogona zvakare kuve zvakafanira kuchengetedza humbowo, uhwo hunogona kubatsira kutevedzwa kwemutemo mukupindura zvine mutsindo.
Kumhan'arira Hodges University
The Dingindira IX Murongi ndiye munhu akasarudzwa neUniversity kuti aratidze kuedza kwayo kutevedzera Musoro IX mabasa. Yese mishumo yekusazvibata inofanirwa kuendeswa kuYunivhesiti Musoro IX Coordinator:
Kelly Gallagher, Musoro IX Murongi
(Iwo Musoro IX Coordinator's Kudzidziswa kunogona kuwanikwa pano.)
Chero munhu anokwanisa kumhan'ara zviitiko zvekusazvibata pabonde zvisinei nekuti bato riri kumhan'ara ndiye munhu anonzi ari kuitiswa hunhu hwakadai.
Pamusoro peChinyorwa IX Coordinator, vamwe vashandi vanodikanwa neUniversity kuti vape ruzivo nezvehunhu husina kunaka kune Mutungamiriri IX Murongi. Vashandi ava, vanonziwo Vashandi Vakavimbika, vanhu vakasarudzwa neUniversity kuti vapindure vakamirira iyo University kupomero dzekutyorwa kwemapurisa ane chekuita neHodges University. Vashandi vane mutoro vanosanganisira Mutungamiriri, Mutevedzeri Wemutungamiriri weMabasa Ekutonga, uye Mutevedzeri Mukuru weVadzidzi veZvidzidzo.
Mumwe munhu anomhan'arira chiitiko kumushandi weUniversity asiri Mushandi Anemutoro ane njodzi yekuti ruzivo irworwo harugadziriswe neYunivhesiti. Naizvozvo, munhu anoshuvira kuti University iite anokurudzirwa zvakanyanya kuti amhan'are hunhu kune imwe yemahofisi akanyorwa pamusoro.
Asingazivikanwe Mishumo: Chero munhu angaita mushumo asingazivikanwe maererano nekuzvibata kwepabonde. Zvichienderana nehukuru hweruzivo rwuripo nezve chiitiko kana vanhu vakabatanidzwa, kugona kweYunivhesiti kupindura kune mushumo usingazivikanwe kunogona kushomeka. Musoro weIX Coordinator anoona chero matanho akakodzera anogona kutorwa pane mushumo usingazivikanwe, kusanganisira munhu kana mishonga yemunharaunda seyakakodzera, uye zvakare kuona kutevedza zvisungo zvese zveClery Act.
Ndokumbira utarise kuti Chikumbiro cheMutemo hachikwanisi kumisikidzwa zvisina zita, uye inongotarisirwa kunge yakamhan'arwa chete apo chichemo chacho chine siginicha yepanyama kana yedhijitari, kana neimwe nzira zvichiratidza kuti Munyunyuti ndiye munhu ari kumhan'arira Chichemo.
II. Nezve Chinyorwa IX
Musoro IX weEducation Amendments ya1972 (Musoro IX) unoti, "Hapana munhu muUnited States, pahwaro hwebonde, achabviswa kupinda mukutora, kunyimwa mabhenefiti, kana kuitirwa rusarura pasi pechirongwa chipi zvacho chedzidzo. kana chiitiko chinowana rubatsiro rwemari kubva kuhurumende. ” Inoenderana neChinyorwa IX, Hodges University yakazvipira kuchengetedza nzvimbo yekudzidzisa uye yebasa isina rusarura zvisiri pamutemo nekushungurudzwa.
Zvinoenderana neChinyorwa IX sekuturikirwa neDhipatimendi reDzidzo reUnited States, Yunivhesiti yatora mutemo unorambidza rusaruro pabonde, uye unopa nzira yekuchema-chema kugadzirisa kuputswa. Nechinangwa ichi, maitiro anozofungidzirwa kuti akaitika pahwaro hwepabonde kana maitiro akadaro akaitika nekuda kwehunhu hwemunhu, zvebonde, kuzivikanwa kwechikadzi uye chinzvimbo che transgender.
Musoro IX unoshanda kune chero mudzidzi, mushandi, kana mumwe munhu anotora chikamu muchirongwa cheYunivhesiti kana chiitiko muUnited States, zvisinei nebonde remunhu, zvebonde, kunyoresa kana chinzvimbo chebasa, hurema, rudzi, chitendero, kana nyika mavambo. Zvese zvirevo zvine chekuita nekushungurudzwa pabonde, kusarura pabonde / murume nemukadzi, mhirizhonga pabonde, kana hunhu husina kunaka zvinofanirwa kumisikidzwa zvinoenderana nemutemo weYunivhesiti weChita IX zvisinei nemudzidzi kana chinzvimbo chebasa.
III. Mutemo Wevadzidzi
IV. Faculty uye Staff Policy
Kana iwe uri munjodzi nekukasira, kana kana iwe uchidavira kuti pangave nekuenderera kwekutyisidzira kwauri kana kune vamwe paYunivhesiti, ndapota nyorera Kutevedzwa Kwemutemo na kufona 911.
Kutsvaga rubatsiro nekukasira kungave kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuchengetedza muviri kana kuwana kurapwa kana kumwe kutsigirwa. Zvinogona zvakare kuve zvakafanira kuchengetedza humbowo, uhwo hunogona kubatsira kutevedzwa kwemutemo mukupindura zvine mutsindo.
Zvimwe zviwanikwa zvemuno neenyika zvinosanganisira:
Iyo Shelter yeVakashungurudzwa Vakadzi & Vana, 239.775.1101
Chirongwa Rubatsiro Naples, 239.649.1404
Florida Dzimba Dzemhirizhonga Pamba, 1.800.500.1119
Nhare Yenyika Dzese Yemhirizhonga Mudzimba, 1.800.799.7233
Yenyika Yese Yekushungurudza Zvepabonde Hotline, 1.800.656.4673
Zvinongedzo kune zvisiri-yunivhesiti zvakachengetedzwa nzvimbo kana zvemukati hazvimiriri kutsigirwa neHodges University kana vanobatana navo.
Ndatenda nekushanyira Hodges 'webhusaiti. Hodges University inotevera mirau nemirau sezvainodiwa neFlorida Statute, US Federal mitemo, uye General Data Dziviriro Regulation (GDPR). Hodges University inogona kuwanikwa pamhepo pawww.hodges.edu. Isu zvakare tine Fort Myers kambasi nzvimbo: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Saiti yedu ine matanho ekuchengetedza munzvimbo yekuchengetedza kurasikirwa, kushandisa zvisirizvo, uye / kana shanduko yeruzivo mukati medu masimba. Isu tinoita zvese zvinoedza kuyedza kuisa munzvimbo yakakodzera panyama, zvemagetsi, uye manejimendi kuchengetedzeka kuchengetedza ruzivo rwatinotora online. Nekudaro, Hodges 'webhusaiti yakavanzika mutemo haina kuitirwa kutorwa sechibvumirano chibvumirano.
Isu tinounganidza nekuzvidira yakapihwa dhata nezve yedu webhusaiti vashanyi kuburikidza nekugadzira account, kunyorera, uye mafomu ekutaurirana akatumirwa kuburikidza ino saiti.
Uyezve, isu tinoshandisa webhusaiti yekutevera dhata kuti tipe yakanakisa mushandisi ruzivo. Isu tinoshandisawo makuki pane webhusaiti yedu kutungamira uye kugadzirisa ruzivo zvichibva panzira yako yekupinda kune ino saiti. Saiti iyi zvakare inounganidza traffic uye yevashanyi ruzivo senge internet domain nekero yeinternet yekombuta iwe yauri kushandisa nekushandisa yakajairika webhu analytics maturusi uye ekuteedzera maturusi. Ruzivo rwunounganidzwa nderwekushandisa kwemukati chete kutsigira kunyoreswa kwevadzidzi, kupindura kumibvunzo yevashanyi vewebhusaiti, uye neyewebsite analytics.
Kana iwe ukataura pane chero chinhu pane yedu webhusaiti, urikuzvidira kuendesa yako email kero uye rumwe ruzivo. Ruzivo urwu rwunoshandiswa kutumira yako ruzivo pane yedu saiti zvinoenderana nekugara uchishandisa. Kana iwe uchida kuti ruzivo rwako rubviswe, ndapota kumbira kubviswa nekutumira tsamba email@hodges.edu. Hatife takatengesa kana neimwe nzira kuzivisa ruzivo rwako kune vechitatu mapato. Hodges Yunivhesiti inoenderana nemitemo inoshanda yemuno, yenyika, uye yemubatanidzwa inotonga kuunganidzwa nekuchengetwa kwemunhu ruzivo. Unogona kusarudza kubva kuGoogle Analytics Kushambadzira Zvimiro kuburikidza neGoogle's Ads Zvirongwa, Ad Zvirongwa zve mobile apps, kana chero imwe nzira iripo. Kana iwe uchida kudzima webhusaiti yekutevera, ndapota chinja zvigadziriso mubrowser yako kuti zvidzivise kuteedzera
Zvinongedzo kune zvekunze zveInternet zviwanikwa, kusanganisira mawebhusaiti, ari kupihwa kuitira ruzivo rwekuziva chete; hazviiti kubvumidzwa kana kupihwa mvumo neHodges University yechero zvigadzirwa, masevhisi, kana maonero ekambani kana sangano kana munhu. Hodges Yunivhesiti haina mutoro wekutendeseka, huchokwadi, kana zvirimo zveinzvimbo yekunze kana yeiyo yeanotevera maratidziro. Bata iyo yekunze saiti mhinduro dzemibvunzo maererano nezviri mukati.
Ruzivo rwese pawebhusaiti yedu rwunopihwa kuitira ruzivo chete. Hodges haisi munzira yekukurudzira masevhisi kwauri kuburikidza nekushandisa kwako webhusaiti yedu. Hodges inobatwa isingakuvadzi kubva kune chero matambudziko anogona kumuka zvichienderana neruzivo runowanikwa pane yedu webhusaiti.
Yedu webhusaiti inogona kuvandudzwa chero nguva. Zvirongwa zvedu zvedhigirii uye zvirongwa zvekubatsira zvemari zvinogona kugadziriswa kana kushandurwa chero nguva uye pasina chero chiziviso chisati chaitika.
Muzhinji, webhusaiti yeHodges inoitirwa kuti ishandiswe nevakuru, kunze kwekunge yakanyatso kunyorerwa vana. Hodges haatore neruzivo ruzivo kubva kuvana vari pasi pemakore gumi nematatu. Kana tikaziva kuti takaunganidza Ruzivo rweMwana pasi pemakore gumi nematatu rwusina kupihwa isu nekuzvidira, tinobvisa iyo data kubva kumasystem edu.
Ruzivo rwese ruri mune ino webhusaiti rwakachengetedzwa nekopamutemo pasi peMutemo weCopyright we1976. Unogona kusashandisa chero zvemukati zvinosanganisira, asi zvisina kuganhurirwa ku: mifananidzo, dhata rehunyanzvi, kana logo pasina mvumo yakajeka kubva kuHodges University.
Kana iwe uri munhu mukati meEU uye iwe uchidyidzana naHodges mune mamiriro echiZiviso ichi, iyo GDPR inopa anotevera kodzero. Kuti ushandise chero rwekodzero idzi, ndapota nyorera Data Dziviriro Officer paKupton@hodges.edu.
Iva neruzivo - kuunganidzwa uye kushandiswa kwedata rako rakatsanangurwa apa;
Kumbira kuwana kana kugadzirisa zvisiri izvo data rako rakachengetwa pamusoro pako;
Kumbira kuti data rako rega ribviswe kana risisiri kudikanwa kana kana kurigadzirisa zvisiri pamutemo;
Inopokana nekugadziriswa kwe data rako pachako nekuda kwekushambadzira kana pazvikonzero zvine chekuita nemamiriro avo chaiwo;
Kumbira kurambidzwa kwekugadziriswa kwe data rako pachako mune mamwe mamiriro;
Wana chako pachako data ('data kutakurika');
Chikumbiro chekusave pasi pechisarudzo chakanangana ne otomatiki kugadzirisa kwega data, kusanganisira profiling.
Dhata remunhu rinogadziriswa chete kana mutemo uchitendera kuti zviitike. Mune zvimwe zviitiko, Hodges inogona kupa rumwe ruzivo nezve maitiro ayo ekugadzirisa mune yayo yekuwedzera kana chiziviso chakaparadzana. Kazhinji kazhinji, data rako pachako rinogadziriswa naHodges mune inotevera mamiriro:
Kwatakatipa mvumo yako.
Kuti uzadzise zvisungo zveHodges kwauri sechikamu chebvumirano yako yebasa kana kunyoreswa.
Iko Hodges inoda kutevedzera chisungo chepamutemo (semuenzaniso, kuona kana kudzivirira kwematsotsi nemitemo yemari).
Pazvinenge zvichikosha kune zvido zveHodges zviri pamutemo (kana zvewechitatu) uye zvaunofarira uye kodzero dzakakosha hazvipfuure izvo zvido.
Kuchengetedza zvakakosha zvezvinhu zve data kana zvemumwe munhu (semuenzaniso, mune yekukurumidzira kwekurapa).
Kuti tiite basa rinoitwa mukufarira veruzhinji kana kushandiswa kwesimba repamutemo rakapihwa matiri.
Sesangano reAmerican redzidzo yepamusoro, iko kugadziridzwa kweinenge dhata yega naHodges kuchaitika muUnited States. Vanoshanyira ino webhusaiti vanobvuma kuti dhata yemunhu yakapihwa kana kuunganidzwa kuburikidza newebhusaiti yayo inozotamisirwa kuUnited States, uye nekuramba uchishandisa webhusaiti yakadaro, unobvumidza kuchinjisa uku.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve edu marongero maererano nemitemo yekushandisa, ndapota taura nesu kukero yeemailvuma@hodges.edu.